Maxay tahay sababta Sawirkan loogu kala Iibsaday Todoba milyan? | Hargeysa World~Herald
Maxay tahay sababta Sawirkan loogu kala Iibsaday Todoba milyan?
GanacsigaMaxay tahay sababta Sawirkan loogu kala Iibsaday Todoba milyan?
Ayaanle LK waa muwaadin dhallinyaro ah oo ku nool Magaalada Hargeysa. Waxa uu aad u isticmaalaa baraha bulshada. Waxa uu ku soo bandhigaa sawiraana dareenka bani-aadanimada xabaarsan.
Ayaanle LK waxa uu soo gudbiyaa sawiraana farshaxanka ah ee khuseeya dhaqanka. waxa uu hal-abuuraa farshaxan sawiraana ku aadan arrimaha bulshada nolosha adyawgana lagu dabbaqaayo.
Shirkadda SOMAR SOOR oo ka shaqaysa arrimaha tiknoolojiga iyo farshaxanka ayaa iibsatay Sawir dhowaan aad u dhexqaaday baraha bulshada oo soo bandhigay Ayaanle LK. “Waxaa jira sawir aan iibsnay oo gaadhaysa 7milyan oo somaliland shiling ah’, Maamulaha guud ee dhirkadda Soomar.
hadaba si aad uga bogato acluumaadkan daawo muuqaalkan.